Real Madrid oo guul raaxo leh ka gaartay Celta Vigo, iyo Santiago Solari oo halkiisa kasii waday guulahiisa xiriirka ah ee Los Blancos – Gool FM
Dajiye November 11, 2018
(La Liga) 12 Nof 2018. Kooxda Real Madrid ayaa guul raaxe leh kaga soo gaartay dhigeeda Celta Vigo 2-4, kulankooda 12-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaamineesay kooxda martida ahayd ee Real Madrid.
Daqiiqadii 23 -aad ayaa waxaa ciyaarta 1-0 ka dhigay Karim Benzema, kadib markii uu caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis khadka dhexe ee Luka Modric.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada kooxood ayaa waxay halkooda kasii wadeen weerar iyo weerar celis, balse Real Madrid ayaa iyada ahayd kooxda awood badneed kulankan.
Daqiiqadii 53-aad Real Madrid ayaa ciyaarta ka dhigtay 2-0, kadib markii uu xidiga kooxda Celta Vigo Gustavo Cabral uu si kam ah kubada u daba marsiiyay shabaqa kooxdiisa ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 2-0.
Laakiin daqiiqadii 61-aad Celta Vigo ayaa dib ugu soo laabatay ciyaarta waxayna la timid gool uu u dhaliyay laacibkeeda Hugo Mallo wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-2.
Makan daqiiqadii 83-aad garsooraha ciyaarta ayaa kooxda martida ahayd ee Real Madrid ku abaal mariyay gool ku laad ama rigoore waxaana u dhaliyay kabtankooda Sergio Ramos, kaasoo ciyaarta ka dhigay 1-3.
Daqiiqadii 87-aad laacibka kooxda Celta Vigo Gustavo Cabral ayaa qaatay karaka roosaha.
90-ka daqiiqao ee ciyaarta Dani Ceballos ayaa wuxuu dhaliyay goolka 4-aad ee kooxda Real Madrid, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-4, kadib markii uu goolkan ka caawiyay Sergio Ramos.
Laakiin dhamaadka ciyaarta ee 90-ka daqiiqo kooxda Celta Vigo ayaa ciyaarta ka dhigtay 2-4, kadib markii ay goolkan ka heshay xidigeeda Brais Mendez oo goolkan ka caawiyay Iago Aspas, ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 2-4.
Juventus oo guul muhiim ah ka gaartay AC Milan, xili Cristiano Ronaldo uu ka baxay inkaarta ka heysatay garoonka San Siro